Wahaabiyada Sucuudiga iyo Imaaraadka oo Maraykanku cirka ka taageerayo oo Xudeyda weeraray - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wahaabiyada Sucuudiga iyo Imaaraadka oo Maraykanku cirka ka taageerayo oo Xudeyda weeraray
Wahaabiyada Sucuudiga iyo Imaaraadka oo Maraykanku cirka ka taageerayo ayaa weeraray magaalada dekedda leh Xudeyda ee Yaman. Dhim,asho xooga ayay kala kulmeen markii ay weerarka ku soo qaadeen gawaadhida Toyotaha.
Ciidanka dawlada Yaman oo aad u taag daran markii diyaaradaha Yuhuuda iyo Maraykanka ka burburiyeen hubkii cuslaa ayaa haddana Wahaabiyiita iyo Salafiyiinta Daacish ay waxba ka qaadi waayeen kadib markii ciidanku jilbaha fidsadey.
Salafiyiinta Sucuudiga iyo Imaaraadka ayaa galaaftey qaxa malaayiin Muslimiinta reer Yaman oo la tacaalayo gaajo iyo silic.
Qabsashada dekedda ayaa ka dhigan inay maamulaan ama u soo dhawaadaan dhinaca Woqooyi ee Yaman ayagoo markii hore ku ekaa dhinaca Koofurta kaliya weliba soo dhaafi waayay buuralayda Ticis ama magaaladaba.
Yaman ayaan helin hub ku filan oo isaga celiso argagixisada Salafiyiinta oo aduunka Muslimka ah ka wada qaska iyo dhibaatada urur diimeedyada.